IFULETHI ELISHA ELIPHANSI ELINEZITEZI - I-Airbnb
IFULETHI ELISHA ELIPHANSI ELINEZITEZI
Grézieu-la-Varenne, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-studio esithokomele esilungiswe ngokuphelele, sesimanje futhi esisanda kulungiselelwa ukunethezeka kwakho: igumbi lokuphumula, ikhishi elifakiwe, ishawa nendawo yokulala ehlukile enezinto zokulala zezinga eliphezulu, i-inthanethi ifakiwe.
Akuvamile neze, i-studio iyazuza kwi-terrace nengaphandle elibiyelwe, kanye nefenisha yengadi ejabulisa kakhulu ehlobo, evumela ukuzola, ukuba nesiphuzo esiyi-1, isidlo sasemini, noma ukuzuza elangeni.
Ngezansi kwe-Monts du Lyonnais futhi eduze kakhulu nokuqwala izintaba nemizila yamabhayisikili yasezintabeni.
★ INDAWO YOKUHLALA
★Istudiyo sitholakala ngemuva kwesakhiwo esincane samafulethi angu-7, esinokufinyelela kanye nendawo yokungena ezimele. Ziningi izindawo zokupaka zamahhala eziseduze.
★Ifulethi liqukethe ikamelo elihle eligqamile nelinokuthula, ikhishi elinakho konke, ikamelo elihlukile elinombhede omusha, ontofontofo kakhulu kanye negumbi lokugezela langasese elihle ngokuphelele.
I-studio sinezindawo eziningi zokugcina izinto zakho ngesikhathi sokuhlala.
★ LONKE IQEMBU
★- ithelevishini ye-HD
- I-wifi yamahhala ye- optic
- Umbhede omusha sha wabantu abangu-2 onamashidi ekhwalithi
- Ikhabethe lokugcina izinto zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho
- Ikhishi elinakho konke: amathempulethi ashisayo, isiqandisi, i-microwave uhhavini kanye ne-crockery enikeziwe (amapuleti, izingilazi, izinto zokudlela, izitsha, izinkomishi, izingilazi zewayini nengilazi ye-champagne ...)
- Umshini wokwenza ikhofi we-Tassimo, iketela kanye
ne-toaster - Amashidi namathawula ombhede anikeziwe
- Umshini wokomisa izinwele -
I-ayini nebhodi loku-ayina
- umshini wokuwasha - Indawo yokudlela enetafula
- Indawo yokuhlala enosofa
Hlola ezinye izinketho ezise- Grézieu-la-Varenne namaphethelo